သငျသညျအိပ်မက်ကိုရပ်တန့်လျှင်, သင်လမ်းလျှောက်ရပ်တန့်! - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
ယင်းဟာ Rapper Bobby Kinta နှင့်အတူအင်တာဗျူး
အဆိုပါဟာ Rapper Bobby Kinta ရဲယူနီဖောင်းများနှင့်အနုပညာမှကျိန် ဆို. ပူဇော်စွန့်ပစ်။ သူကသီချင်းတွေဘဝအကြောင်းကိုအများအပြားအမှန်တရားတွေနှင့်ပြည့်စုံနဲ့သူ့သီချင်းစာသားထဲမှာရှိသမျှစကားလုံးတစ်အဓိပ္ပာယ်ကိုရှိပါတယ်ကွောငျ့, သူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အများစု၏ရှိသူများအနေဖြင့်ကွဲပြားကြသည်။ သူဟာရှိသည်မဟုတ်ပါဘူးပစ္စည်းဥစ္စာအကြောင်းကိုသီခငျြးဆိုပါဘူး, ဒါပေမယ့်အသက်တာ၌အမှုအရာနှင့် ပတ်သက်. သူနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်နှင့်စိတ်ခံစားမှုအဖြစ်ခံစားခဲ့ရသညျ။
© Bobby Kinta
ငါအောင်မြင်သောဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရနိုင်တယ်လို့မည်မျှကိုမသိရပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါ့အဘို့ကသူ၏မျက်စိကိုသင်အောင်မြင်ဖြစ်ချင်တယ်အတွက်အရေးကြီးပါတယ်။ ငါဘာကြိုက်တယ်ဆိုတာကျင့်သောကြောင့်ငါကကြိုက်နှစ်သက်လမ်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုအောင်မြင်သောခေါ်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်မ TV ပေါ်မှာရှိသမျှသောအချိန်မပေးဘူးလျှင်, ငါသည်အောင်မြင်သောမဖွစျနိုငျသညျဟုမထငျပါဘူး။ ငါစကားကိုနားထောငျသူမြားကိုငါထိမိငါ့စကားထဲမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့ကိုရှာဖွေခဲ့ကြသောသူတို့အဘို့အောင်မြင်သောမိပါတယ်။ ငါသည်ငါ့စကားနှင့်တစ်စုံတစ်ဦးကိုထိမိပါဘူးဆိုရင်, ငါအောင်မြင်သောဟုခေါ်တွင်စေနိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ မည်သူမဆိုနေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့ယုံကြည်ကြပြီးလောဘကြီးမဟုတ်ပါဘူးအဖြစ်အောင်မြင်သောဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အမှန်တကယ်က, ဂီတ, အားကစားသို့မဟုတ်အရာအားလုံးထက်င်ဖြစ်စေ, သူတို့အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုသို့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုထည့်လေ့မရှိအောင်မြင်သောဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရနိုင်တယ်လို့သူမည်သူမဆို။
Ivelina Dimitrova, အကွောငျးရငျး, ဂီတ, ရက်ပ်, ရက်ပ် | 14-12-2016 | rating:5/ 30